Rocky Linux 8.6 iri pano, inosvika yakavakirwa paRHEL 8.6 | Linux Addicts
Musi waNovember 15, the v8.5 yekugovera iyi ine zita rebhokisi, iyo yakasvikawo inenge 5 mwedzi mushure me v8.4. Iyo yakanaka imwe nzira kune CentOS, uye munguva pfupi yapfuura vashandisi vanoiedza vanga vachiifarira zvakanyanya. Angangoita maawa makumi maviri nemana apfuura, timu yevagadziri kumashure kweichi chirongwa vakakanda RockyLinux 8.6, inogadziridza isina nhau itsva chaiyo isingapfuuri kuvandudzwa.
Muchinyorwa chekuburitsa ivo vanosimbisa zvinhu zvishoma, seizvo zvavari kushandisa ikozvino PHP 8.0 kana Pearl 5.32. Muzviitiko zvese izvi, tsikidzi dzakagadziriswa uye kumwe kuvandudzwa kwakawedzerwa, asi hapana chinofanira kuita kuti avo vari pa8.5 vanzwe kuda kugadzirisa izvozvi. Kunyange zvakadaro, isu takakwanisa kugadzira diki diki nemaitiro matsva auya pamwe neRocky Linux 8.6.
Rocky Linux 8.6 Highlights
Zvitsva zvehurongwa, senge iyo itsva HA (Kuwanikwa Kwepamusoro), kutonga kuri nani kana uchibata masumbu akawanda, yakagadziridzwa sisitimu networking basa kutibvumira kugadzira yakachengeteka yakabatana nemitemo yakasimba ye firewall uye basa reWebConsole kuita otomatiki kuisirwa uye kumisikidzwa kweiyo inoshanda. system web console.
Zvimwe zvitsva zvinouya zvakananga kubva kuRHEL 8.6, uko pamwe shanduko dzakanyanya kukosha dziri.
RockyLinux 8.6 inowanikwa kubva nezuro May 17, uye inogona kutorwa kubva Iyi link. Vashandisi varipo vanogona kuvhura terminal uye vonyora "dnf update" pasina makotesheni.
Mutsamba ino yekuburitsa vataurawo mukana wekubva kubva kuRed Hat Enterprise Linux kuenda kuRocky uchishandisa script migrate2rocky, inowanikwa mukati iyi GitHub peji. Kunyangwe ichifanirwa kuve inoshanda kuRHEL, pane GitHub peji vanonyatsotaura kuti "Kumhanyisa chinyorwa ichi kuchashandura iripo CentOS 8 system kuita Rocky Linux 8«, kune avo vari kufunga kuita shanduko uye vasingade kuisa kubva kutanga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Rocky Linux 8.6 iri pano, inosvika yakavakirwa paRHEL 8.6